कोरोनाभाइरसको ‘तबाही’ : महामारी रोक्न मानव–चेन कसरी तोड्ने ?
राय सामाजिक अभियन्ता हुन् ।
पहिला नै हामी खाडी मुलुकबाट नेपाल आउनेहरूको खोजबिनमा ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेका थियौं र अब दिल्लीको निज्जामुद्दीनस्थित तबलीगी जमातबाट फैलिएको कोरोना संक्रमण र यसमा नेपालीको सहभागिताले थप चुनौती थपिएको छ ।
तबलीगी जमातबाट फैलिएको कोरोना–चेन नेपालको लागि पनि आउने महामारीको संकेत हो । यसलाई सीमापारि नै रोकिएन भन्ने यसले ‘तबाह’ गर्नेछ हामीलाई ।
चैत्र १७ र १८ गते दिल्ली प्रहरीले तबलीगी जमातको केन्द्र निज्जामुद्दीनको मर्कज मस्जिदमा लकडाउनको कारण फसेका १ हजार ८३० जनालाई निकालेर केहीको कोरोना परीक्षण गराउँदा ३४ जना कोरोना संक्रमित भेटिएपछि र केही जनाको मृत्यु भएको खबरले पूरै भारतमै त्रास फैलिएको छ । तबलीगी जमातले मरगजमा फसेका १ हजार व्यक्तिबारे प्रशासनलाई लिखित जानकारी दिएका थिए, जसमा २८१ जना विदेशी रहेको खुलेको छ । यसमध्ये १९ जना नेपालका रहेको दिल्लीस्थित नेपाल दूतावासले पुष्टि गरेको छ ।
सबैको नाम र ठेगाना दूतावासले नेपाल सरकार पठाइसकेको छ । नेपाली मिडिया ‘न्युज टुडे’का अनुसार केही व्यक्ति सोमवार राति सीमा छलेर राजविराज फर्केका छन् तर उनीहरू सबै सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।
विशेष स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सप्तरीका ८ जना बिहारको फोर्बेसगञ्जबाट नै फिर्ता भएका छन् । बाँकी कहाँ छन् भन्नेबारे कसैलाई जानकारी छैन । मस्जिदको मदरसामा नेपालका १३ विद्यार्थी समेत पढिरहेका र उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थापन भारत सरकारले नै गर्ने बताइएको छ ।
तबलीगी जमातको कार्यक्रम १९ जनाभन्दा बढी नेपालबाट गएको हुनसक्ने आशंका पनि रहेको छ । केही हप्ताअघि दिल्लीको निज्जामुद्दीनस्थित तबलीगी जमातको धार्मिक कार्यक्रममा देश–विदेशबाट दशौं हजारको संख्यामा भारत लगायत करीब १५ देशका मुस्लिम समुदायको उपस्थित रहेको थियो । जसबारे यससँग सम्बन्ध राख्ने इस्लामिक स्कोलर शोएब जमईले आजतकको एक कार्यक्रममा स्वीकारेका छन्, जसमध्ये ९ हजार पहिला नै फर्किसकेका समेत उनले बताए । पहिला फर्केका ती ९ हजारमा नेपाली थिएनन् होला ?
वास्तवमा निजामुद्दीनमा तबलीगी जमातको केन्द्र भएको कारणले विश्वभरबाट मानिसहरू आउँछन् । त्यसपछि तिनीहरूलाई अलग–अलग समूहमा विभिन्न शहरमा इस्लामको प्रचारप्रसार गर्न पठाइन्छ । ती क्षेत्रहरूको चिट दिइन्छ, जसमा मस्जिदको विवरण हुन्छ । यिनीहरू त्यहाँ पुग्छन् र मस्जिदहरूमा बस्छन् । कोरोना भाइरसको खतराबीच र यसै समूहबाट केहीलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा तबलीगी जमातहरू एक शहरबाट अर्को शहरमा गएकाले भाइरस सर्ने खतरा बढेको छ । यस कथनमा निजामुद्दीनको तबलीगी जमातको केन्द्रमा नेपालीहरूको सहभागिताले भारत मात्र होइन, हाम्रो लागि पनि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यसैले तबलीगी जमातबाट फैलिएको कोरोना–चेनलाई जसरी भएपनि सीमा पारि रोक्न नेपाल सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । नेपाल आएकाहरू तुरुन्त सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आएर जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पालना गर्नुपर्‍यो । केही व्यक्तिको लापरवाहीले पूरै देश खतरामा पर्न जान्छ, यस कुराको बोध तबलीगी जमातको कार्यक्रमबाट फर्केका हाम्रा मुस्लिम दाजुभाइले पनि बुझिदिनुपर्‍यो ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तबलीगी जमातको कार्यक्रममा सहभागीको खोजबिनमा कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन । मुस्लिम धर्मगुरु र अगुवा समेतले खोजबिनमा पूर्णरुपले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतको घटनाबाट शिक्षा लिई नेपाल सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभर सामाजिक दूरी कायम राख्न सबै धर्मको धार्मिक भेलामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा लगायतका सबै धार्मिक संस्थामा तत्काल आमनागरिकको प्रवेश पूर्णरुपले रोक लगाउनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा नै सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो धर्म हो ।
चीनबाट शुरू भएको कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका करीब–करीब सबै देशमा फैलिसकेको छ । एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दै भाइरसले मानव–चेनमार्फत ८ लाखभन्दा बढीलाई आफ्नो चपेटमा लिइसकेका छन्, जसमध्ये करीब चालिस हजारको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोनाले बनाएको मानव–चेनलाई तोड्न नै प्रायःजसो देशले लकडाउन गरेका छन् ।
लकडाउनले देश बाहिरबाट आउने सम्भावित कोरोना संक्रमितलाई रोक्छ भने देशभित्र रहेका संक्रमितबाट संक्रमण फैलिनुलाई नियन्त्रण गर्छ । संक्रमणलाई रोक्न लकडाउन नै सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण र उत्तम विकल्प रहेपनि थप उपायहरू अवलम्बन नगरे यो असरहीन हुनेछ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा सरकारले मुलुकभर लकडाउनसहित कोरोना भाइरस विरुद्धको सम्भावित क्षति कम गर्ने गरी विभिन्न योजना बनाइरहेको छ । यस दौरान सरकारद्वारा केही कमी–कमजोरी देखिएको भएपनि अहिले सरकारको आलोचना गर्नुभन्दा पनि उचित सुझावसहित सरकारलाई साथ र सहयोग दिँदै हामी सबै कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा एकजुट हुनु आवश्यक देखिएको छ । सरकारले पनि यो बिर्सनुभएन कि यो अभूतपूर्व विश्वव्यापी युद्ध हो र पूरै विश्व नै उही दुश्मन नोबेल कोरोना भाइरसको सामना गर्दैछ । यस लडाइँको पहिलो युद्धको मैदान अस्पताल हो, जहाँ हाम्रा सिपाहीहरू मेडिकल कार्यकर्ताहरू हुन् । यो युद्ध जित्न सकिन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले सर्वप्रथम मेडिकल कार्यकर्तालाई प्रविधिसहित पर्याप्त स्रोतको ग्यारेन्टी गरेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
ठूल्ठूला मुलुकले पनि कोरोना भाइरससँगको लडाइँमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । पर्याप्त अनुभव र स्रोतसाधनको कमीले गर्दा हाम्रो सरकारका अगाडि चुनौतीहरू झन् थपिएका छन्, धेरै ठाउँमा सरकार चुकेका पनि छन् तर अब पहिलो लकडाउनको अनुभव र चीनबाट आएका मेडिकल सरसामग्रीले परिस्थिति पहिलाभन्दा सहज अवश्य बनाएको छ ।
कोरोनाको मानव–चेन तोड्न लकडाउन पहिलो उपाय हो भन्ने बाहिरबाट आएका सम्भावित संक्रमितको पहिचान गर्नु, उनीहरूको कोरोना परीक्षण गर्नु र लक्षण अनुसार क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्नु दोस्रो उपाय हो ।
हालसम्म नेपालमा ५ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्, यिनीहरू सबै विदेशबाट नै आएका थिए । चैत्र ४ गते कतारबाट कतार एयरवेज क्यूआर ६५२, चैत्र ६ गते यूएईबाट एयर अरयिबा जी९५३७ र दिल्लीबाट विस्तारा एयर लाइन्स यूके१५५ बाट नेपाल आएकामध्ये कोरोना संक्रमित पुष्टि भएका छन् । यी विमानबाट फर्केका सबैको कोरोना परीक्षण आवश्यक थियो, जुन समयमै भएन ।
हामी सबैको साझा बुझाइ के रह्यो भने कसैमा ज्वरो वा रुघा लागेको देखिएमा मात्र कोरोनाको सम्भावित संक्रमित हुनसक्छ । यही बुझाइमा सरकार पनि अघि बढ्यो । चैत्र ४ गते कतारबाट आएका मध्येबाट प्रायःजसोको ज्वरो मात्र परिक्षण गरियो । विदेशबाट आएकाहरूको स्वाब परीक्षण नै नगरी कोरोना नेगेटिभ भनेर प्रचार गरियो । केही दिनअघि म स्वयं कतारबाट आएका १ जनालाई खोजेर जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल लगेर जाँच गराए र उनको पनि ज्वरो मात्र परीक्षण गरिएको थियो । कोरोनाको उच्च शंकास्पदमा रहेकाको पनि स्वाब जाँच नहुनु शतप्रतिशत लापरवाही हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्यूएचओ) ले भनिसकेको छ –कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएपनि संक्रमण भेटिएको छ ।
चीनको तोङ्जी अस्पतालको प्रमुख वाङ वीले एउटा अन्तर्वार्तामा आफ्नो अस्पतालमा आएका ५ जनामा कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएपनि ‘पोजिटिभ’ पाइएको जनाएका छन् ।
बजारमा भ्रम र डर दुवै फैलिएको छ, जनता त्रसित छन् । मास्कबारे जनतामा ठूलो भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । मास्क लगाउँदा कोरोनाभाइरसबाट जोगिन्छ भनेर अन्य सतर्कता नअपनाई मास्क लगाएर ढुक्क भएका छन्, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मास्कको साथ–साथ अन्य सतर्कता अपनाउन प्रस्ट पारिसकेको छ ।
विदेशबाट आएर जाँच गराउन अस्पताल गए भने प्रहरीले समातेर १४ दिन कतै थुनिदिन्छ (क्वारेन्टाइन) भन्ने ठूलो डर मनमा रहेको देखिन्छ । परिणामस्वरुप विदेशबाट आउनेहरूमध्ये धेरैजना लुक्दै हिँडेका छन् । कोरोना भाइरस र सरकारले गरेको निर्णयबारे जनतामा सही जानकारी जानु जरुरी देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि महामारीको रूप लिनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सबै जना त्यस्तो अवस्था आउन नदिन विशेष चनाखो र सतर्क हुनुपर्छ । कोरोनाको महामारी फैलिन दिने वा नदिने भन्ने विषय सरकार र नागरिककै हातमा छ । बाहिरबाट आएकामाथि विशेष निगरानी बढाउनु आवश्यक छ । यो कार्य स्थानीय तहले सहज तरिकाले गर्न सक्छ । हरेक वडाका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो वडाको निगरानी इमान्दारीपूर्वक गरे भने हामी सजिलै कोरोना मानव–चेन तोड्न सफल हुन्छौं ।
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी देख्नुको कारण त्यहाँ सबैभन्दा बढी कोरोना परीक्षण हुँदैछ । जहाँ परीक्षण नै हुँदैन, त्यहाँ यथार्थ ओझलमा हुन्छ र लुकेको कुरा आउने संकटको अदृश्य सूचक हुन्छ । सरकारले पहिलो चरणमा बढीभन्दा बढी कोरोना सम्भावित संक्रमितको परीक्षण गर्नुपर्छ ।
सरकारी तयारीको साथ–साथ जनताले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिएको छ । सामाजिक दूरी र लकडाउन अनुशासित भएर पालना गर्नुबाहेक तत्काल अन्य विकल्प छैन ।